Ny zava-misy eo amin'ny fiovan'ny toetrandro ho an'ny fianjerana Condo any Florida dia mitera-doza ho an'ny morontsiraka Miami, fizahan-tany ary olona an-tapitrisany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny zava-misy eo amin'ny fiovan'ny toetrandro ho an'ny fianjerana Condo any Florida dia mitera-doza ho an'ny morontsiraka Miami, fizahan-tany ary olona an-tapitrisany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hotels & Resorts • LGBTQ • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Resorts • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny tany mando dia mety hiteraka fianjeran'ny trano. Faritra marefo any South Miami Beach
Tandindomin-doza ny fianjeran'ny fizahan-tany sy toeram-ponenana an-tapitrisany ao amin'ny faritra Miami Beach. Ny fikarohana nataon'i Dr. Shimon Wdowinski dia nifantoka tamin'ny fampivoarana sy ny fampiasana teknikan'ny geodetic habakabaka izay afaka mamantatra tsara ny fihetsehana kely ambonin'ny tany. Nolazainy tamin'ny Daily Mail tany Londres fa fantany avy hatrany izay tranobe nirodana ary namono olona maro tany Seaside, Florida.
Ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny ranomasina dia mety ho ny fianjeran'ny tranobe Florida Champlain Tower Condo miaraka amin'ny mety hisian'ny zavatra maro hanaraka.
FNilaza ny mpampianatra profesora lorida, Shimon Wdowinski, fa fantany avy hatrany hoe trano iza no nirodana rehefa nahare tatitra momba ny vaovao izy an'ny tranobe Seaside Champlain Tower South Condo any Florida.
Trano hotely sy trano fandraisam-bahiny telo hafa no milentika haingana kokoa any Surfside, Park View Island, ary South Miami Beach ao amin'ny faritry Flamingo.
Profesora ao amin'ny Oniversiten'i Florida Dr. Shimon Wdowinski nandalina ny tatitra momba ny fananganana navoaka tamin'ny taon-dasa izay nahitana an'i Champlain Towers ao Surfside Florida. Fantany ny antony milentika ireo trano any Miami, Florida miorina amin'ny tany mando.
Ny loza mitatao amin'ny fanjavonan'ny morontsiraka nanjavona dia nampandre ny maro ny amin'ny loza ateraky ny fiovan'ny toetr'andro. Ny faritra mando indrindra - miaraka amin'ny fahafahany miaro ny tanàna amoron-dranomasina amin'ny tondra-drano sy oram-baratra, ary manala ny fandotoana - dia manome fiarovana izay mety ho very amin'ny ho avy
Araka ny fanadihadiana, nilentika nilentika tamin'ny 2 milimetatra isan-taona ny tranobe Champlain Tower Condo tamin'ny taona 1990 satria io dia mipetraka amin'ny honahona averina.
Nasongadin'io tatitra io ihany tranokala telo hafa no nilentika haingana kokoa - ny iray hafa any Surfside, ao amin'ny Park View Island izay misy trano sy sekoly ambaratonga voalohany eo akaiky eo, ary ny roa any atsimo amin'ny Miami Beach ao amin'ny faritry Flamingo..
Ity dia mety ho ny fiandohan'ny zavatra maro hafa ho avy ihany ho an'ity faritry ny fironana ity, sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any South Florida.
The Trano Champlain Tower Condo any Surfside nirodana telo andro lasa izay ary mety namono olona zato na mihoatra izay voalaza fa tsy hita popoka tao anaty rava.
Miami Beach amin'ny lemaka mando
Tena misy ny fiovan'ny toetrandro.
Dr. Shimon Wdowinski dia nahazo BSc tao amin'ny Earth Science (1983) ary MSc in Geology (1985) avy amin'ny Hebrew University (Jerusalem, Israel) ary MS in Engineering Science (1987), ary Ph.D. ao amin'ny Geophysics (1990) avy ao amin'ny Oniversite Harvard. Izy dia nianatra fandalinana postdoctorate tao Scripps Institution of Oceanography (1990-1993); niasa herintaona tao amin'ny Geological Survey of Israel (1993-1994); efa am-polony taona no naha mpampianatra azy tao amin'ny Departemantan'ny Geofisika sy ny siansa momba ny planeta, Oniversite Tel Aviv, mpampianatra (profesora mpanampy, 1994-1998) voalohany ary avy eo dia mpampianatra efa zokinjokiny (profesora mpiara-miasa, 1998-2004); ary nanompo nandritra ny folo taona tao amin'ny Departemantan'ny Marine Geosciences, University of Miami, profesora mpikaroka (2005-2016) voalohany ary avy eo profesora mpikaroka (2015-2016). Nanatevin-daharana ny Departemantan'ny Tany sy ny Tontolo iainana, Florida International University izy tamin'ny taona 2016 ho profesora mpiara-miasa aminy.
Ny fikarohana nataon'i Dr. Shimon Wdowinski dia nifantoka tamin'ny fampivoarana sy ny fampiasana teknikan'ny geodetic habakabaka izay afaka mamantatra tsara ny fihetsehana kely ambonin'ny tany. Nampihariny tamim-pahombiazana ireo teknika ireo handinihana ny fihetsik'ireo takelaka tektonika, horohoron-tany, fidinana an-tanety, hetsika anaty lavaka, hidrôma mando, fiovan'ny toetr'andro ary fiakaran'ny haavon'ny ranomasina.